I-Recipe ye-Chicken Meat kwiSauce yeSauce
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Iimveliso zehlabathi IsiJapan
Imveliso yenkukhu yaseJapan ikhethiweyo ibonakaliswa yizinto ezikhethiweyo zemveliso ezendalo kunye nokucutshungulwa okufutshane. Ukutya kwezilwandle, inkukhu kunye nemifuno kusetyenziswa kakhulu. Izitya zihanjiswe kwiincinci ezincinci, kodwa zihluka kwi-assortment. Ukutya kweJapane kukwahluke ngokutyunjwa okhethekileyo - ezininzi izitya kufuneka zidliwe ngeentonga. Iifuni aziqhathaniswa zisetyenzisiweyo, kwaye imimese kunye neefoloko azisetyenziswanga nonke. Kule nto, zonke izitya zihanjiswe ngendlela yeengcezu ezincinci, ukwenzela ukuba kube lula ukuzithatha izihlunu kwaye akufuneki ukwahlula. Ukuhlobisa izitya kunye nokuseta kwetafile kufana kakhulu kwiiYurophu, kugxininiswa kwindlela yokubukeka kwintlanzi yesitya kunye netafile ngokubanzi. Namhlanje siza kulungiselela inyama yenkukhu e-Teriyaki. Indlela yokulungiselela le sauce, esele saziyo. I-Marinade iya kunika i-softness inyama nephunga. Esi sidlo siya kuhombisa itafile ngokufanelekileyo kwidili okanye ukudala isimo sengqondo ngexesha lokutya.
I-flet fillet 300 g
Oliver oil 10 ml
I-teriyaki i-sauce 50 ml
ISesame White 10 g
Inyathelo 1 Ukulungiselela inyama yenkukhu, kufuneka uthabathe inkukhu yenkukhu, i-teriyaki sauce, ioli yeoli, i-sesame emhlophe, i-anyanisi.
Inyathelo 2 Hamba inkukhu eneemivalo ezincinci.
Inyathelo lesi-3 Ukuhambisa inyama kwi-teriyaki sauce. Faka efrijini imizuzu engama-20.
Inyathelo 4 Hlaba i-anyanisi zibe ngamacangci.
Inyathelo 5 Beka inyama yenkukhu kwi-pan yokucoca kunye neoli yeoli kunye neoli ye-marinade. Fry imizuzu engama-2 ukushisa okuphezulu, ngoko ukunciphisa ubushushu, ukuze ungatshisi inyama, upheke enye imizuzu emihlanu.
Inyathelo 6 Hlanganisa i-anyanisi, ngokukhawuleza ujabule. Thela i-marinade kwenyama uze upheke enye imizuzu emi-2.
Isinyathelo 7 Beka inyama kwisitya. Ngcolisa imbewu yeesame. Ukukhonza inyama ye-sauce kunye nemifuno ebhaka.
Ikhekhe lePasika nge recipe endala
I-Cherry ebusika - i-jelly, i-jam, i-jam - zokupheka ezintsha nezilula. Iireki kwi vodka ekhaya
Intlungu yokuzalwa yowesifazane ngaphandle kwemithi
Isaladi kunye nengca
Iintlobo zokuzihlaziya abantu abafuna ukunciphisa umzimba
UMaria Kozhevnikova watsho ngobukhoboka ebomini bakhe
Iintlobo kunye neengxaki zokuzibamba okuqhubekayo
Imilenze yenkukhu ngendlela yaseAsia
Iingcebiso zabantu malunga nokunyanga kwe-eczema
Ukulala ngexesha lokukhulelwa: iingcebiso ezincedo
Indlela yokwenza inhalation kubantwana ngokuchanekileyo